शुक्रबारका टप १० समाचार, तपार्इंले छुटाउनुभयो कि ? | Ratopati
शुक्रबारका टप १० समाचार, तपार्इंले छुटाउनुभयो कि ?
गृहमन्त्रीको जवाफः समय तोक्न मिल्दैन, पूर्वराजदूत झा हत्या प्रकरण, नेकपामा सचिवालय सदस्य नै असन्तुष्ट !, मनोरम मानसरोवरमा भेटिइन् मनमोहिनी बाटुली
जस्ता समाचार चर्चामा रहे ।
पूर्वराजदूत झा हत्या प्रकरण : पाले र माली छुटे, अनुसन्धान गर्दा यातना !
काठमाडौँ । फ्रान्सका लागी पूर्व नेपाली राजदूत केशवराज झाको हत्या भएको करिब एक महिना भैसकेको छ । भदौ ४ गते काठमाडौँको बवरमहलस्थित आफ्नै निवासमा हत्या गरिएका झाको हत्यारा अझै पत्ता लागेको छैन् ।
सुतिरहेको ठाउँमा मृत फेला परेपछि घटनाको अनुसन्धान शुरु गरेको प्रहरीले उनको हत्या भएको निष्कर्ष निकाल्दै सुरक्षा गार्डको काम गर्दै आएका सानुकान्छा तामाङ, मालिको काम गर्ने आइतसिंह तामाङ र जय बहादुर गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
तर, अनुसन्धानको क्रममा तिनैजनाको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेपछि उनीहरु छुटेका छन् ।
‘हामीले अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिएका तिनैजना धरौटीमा रिहा भएका छन्,’ घट्नाको अनुसन्धान गरिरहेको अपराध महाशाखाका प्रमुख (एसएसपी) धिरज प्रताप सिंहले भने, ‘अनुसन्धानको क्रममा नियन्त्रणमा लिएकाहरुको त्यति संलग्नता देखिएन्, थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
प्रश्न : निर्मला हत्याको दोषी पत्ता लगाउन कति वर्ष लाग्छ ? गृहमन्त्रीको जवाफ : समय तोक्न मिल्दैन
काठमाडौं– सरकारले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या लगायत मुलुकको शान्ति सुरक्षाका बारेमा संघीय संसदलाई जानकारी गराएको छ । सो क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पछिल्लो ६ महिनामा मुलुकको शान्ति सुरक्षा सुध्रिएको जवाफ दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको अनुसन्धान, विभिन्न स्थानमा भएका अन्य हत्याका घटना, खोजतलास साप्ताहिकका सम्पादक राजु बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुपरेको कारण, रोल्पाका तरुण दलका नगर अध्यक्ष रोहित पुनको हत्या तथा बाढीपहिरोका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा पुगेको क्षति लगायत बारेमा संघीय संसदका दुवै सदनलाई जानकारी गराएका हुन् ।
‘सबै किसिमका अपराधमा संलग्नलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । पन्तको घटनाबारे पनि सरकार गम्भीर रहेको छ । अनुसन्धान जारी छ । भविश्यमा पनि अपराधीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा गृहमन्त्रीको हैसियतले सदनलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहान्छु’ गृहमन्त्रीले जावफ दिए ।
मनोरम मानसरोवरमा भेटिइन् मनमोहिनी बाटुली
बाटो शानदार थियो । आकाश उस्तै प्रिय । शब्द नबुझे पनि तिब्बतीयन गीतले मनको कुनाकुनासम्म कम्युनिकेट गरिरहेको थियो । धर्ती छोड्नै नपर्ने आकाशमार्गमा ड्राइभर गाडी गुडाइरहेको थियो । हामी सागाबाट मानसरोवर जाँदै थियौँ ।
‘यस्तो रोड कहाँ थियो र ! पठारैपठार गाडीका डोब पछ्याएर सयौं किलोमिटर गुड्नुपथ्र्याे । नदीमा पुल थिएनन् । कतै खाद्यान्न बोक्ने ट्रक बिग्रे घन्टौं भोकभोकै बस्नुपथ्र्यो । अहिलेजस्ता होटेलहरू पनि कहाँ हुनु ! तिब्बत फेरिएको छ । सुविधा थपिएका छन् । ती दिन सम्झँदा अहिले त धेरै सजिलो’, विमलजीले भने ।
म विमलजीको ‘त्यो तिब्बत’को कुरा ‘यो तिब्बत’ यात्रामा सुन्दै थिएँ तर उत्साहपूर्वक प्रतिकृया दिइरहेको थिइनँ । सायद त्यसैले उनले मेरो स्वास्थ्य ठीक छैन कि भन्ने ठानेछन् ।
‘अशोकजी सबै ठीकठाक छ नि ?’, त्यति सोधेर उनले आफ्नो सकस सुनाए, ‘मलाई सागामा त्यति सञ्चो भएन । बिहानभर हाईले हान्यो । त्यसैले एक वाक दिएँ । अहिले ठीकै छ । तर, तपाईंले सागालाई मजाले पचाइदिनुभयो । त्यही भएर तपाईंलाई अब समस्या नहोला ।’
यो पाँच रंगमा उपलब्ध छ । यसको लुक्स स्र्पोर्टस कारको जस्तो छ । यसमा जेडएक्सआई र भीएक्सआई गरी २ प्रकार रहेका छन् । जेडएक्सआईको मूल्य ३२ लाख ४९ हजार छ भने भीएक्सआईको २९ लाख ४९ हजार रहेको छ ।
साउदी अरब र रुसलाई उछिनेर अमेरिका बन्यो सबैभन्दा ठूलो पेट्रोल उत्पादक राष्ट्र
सरकारलाई राजपाको प्रश्न : ‘सिके राउतको भन्दैमा मान्छे मार्न पाइन्छ ?’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका राममनोहर यादवबारे सरकारको जवाफ माग गरेको छ । सो पार्टीले घटनाबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पनि माग गरेको छ ।
संसदको शुक्रबारको बैठकमा राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सुरक्षा दिनुपर्ने प्रहरीकै हिरासतमा रहेको यादवको हत्या भएको भन्दै ‘प्रहरी हिरासतमै मान्छे मर्छ भने कसले सुरक्षा गर्छ ?’ भनी प्रश्न गरे ।
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाउने क्रममा यादव पक्राउ परेको र प्रहरीको यातनाका कारण मृत्यु भएको यादवले दाबी गरे ।
जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राममनोहर यादव सीके राउत समूहका कार्यकर्ता भएको भन्दै राष्ट्रिय हित प्रतिकुल गतिविधि गरेकाले उनलाई पक्राउ गरेर राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको बताए ।
सर्वसाधरण र सरकारको समेत प्राथमिकतामा परेपछि यतिबेला महिन्द्राले सस्तो मूल्यमै सुविधासम्पन्न इलेक्ट्रिक कार बजारमा ल्याएको छ । ई–भेरिटो (E-Verito) नाम दिइएको यो कार, स्टाइलिस मात्रै छैन, सुविधानसम्पन्न र साँच्चैको कार भन्न लायकसमेत छ ।
निर्मला पन्तको परिवारलाई गृहमन्त्रीको आश्वासनः हत्यारा नजिकै पुगेका छौ, छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं
काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले किशोरी निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्राउ गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । गृहमन्त्री थापाले कञ्चनपुरका महिला अधिकारकर्मी र पीडित परिवारसँग शुक्रबार साँझ काठमाडौंमा भएको भेटमा हत्यारा नजिक पुगिएको उल्लेख गर्दै छिट्टै सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिएका हुन् ।
हत्यारालाई छिट्टै सार्वजनिक गरी पीडितलाई न्याय दिने आश्वासन गृहमन्त्री थापाले दिनुभएको कञ्चनपुुरकी अधिकारकर्मी शारदा चन्दले जानकारी दिइन् । उनले गृहमन्त्री थापाले पीडितलाई न्याय दिने आश्वासन दिएपछि न्याय पाउने आशा पलाएको प्रतिक्रिया पनि दिइन् ।
हत्या गरिएकी निर्मलाका बुबा–आमा र स्थानीय अधिकारकर्मीहरुले गृहमन्त्री थापासँगको भेटमा सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानवीन समितिमा स्थानीय नागरिकका तर्फबाट एक जना पनि प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए । नागरिक समाजलाई समेत समेटेर छानविन समिति गठन नगरिएको विषयमा पनि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको पनि अधिकारकर्मीले चन्दले बताइन् ।